रोजाइका १० होमस्टे - फिचर - साप्ताहिक
- प्रकृति दाहाल
स्याङ्जाको सिरुबारीबाट २०५४ सालमा सुरु भएको होमस्टे पर्यटन यतिबेला देशभर विस्तार हुँदैछ । स्थानीय कला–संस्कृति प्रदर्शन गर्नु, अतिथि सत्कार गर्नु, मौलिक उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नु, होमस्टेका विशेषता हुन् । देशैभर छरिएर रहेका होमस्टेमध्ये चर्चामा रहेका दसवटा होमस्टेबारे तयार पारेको सामग्री :
अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएले २०११ मा विश्वका १२ वटा गाउँको सूचीमा समावेश गरेको गाउँ हो– नाम्जे । साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ मा अवस्थित होमस्टेको आकर्षण भनेको आत्मा बस्ने घर हो । उक्त घर अमेरिकाका क्याथोलिक युनिर्भसिटीका १२ जना आर्किटेक इन्जिनियरले बनाएका हुन् । गाउँमा २१ घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको होमस्टेका संयोजक अनिलकुमार राना बताउँछन् । एक रातको ५ सय रुपैयाँ लाग्ने राना बताउँछन् । रानाका अनुसार एकरातको प्याकेजमा स्वागत, डिनर, बास र ब्रेकफास्ट समावेश छ । होमस्टेमा मकैको भात, लोकल कुखुराको मासु, बंगुरको मासु र अतिथिका लागि इच्छाअनुसार पेयपदार्थ पनि व्यवस्था गरिन्छ । नाम्जे पुग्न धरानबाट भेडेटार हुँदै पुगिन्छ । धरानबाट नाम्जे २१ किमि छ । धरानबाट भेडेटार जान राजारानी जाने बस चढ्नुपर्छ । भेडेटारबाट नाम्जे ४ किमि छ । भेडेटारबाट बसमा जान सकिन्छ ।
चियाले प्रख्यात स्थान हो– इलाम । १ हजार ८ सय २३ मिटरमा रहेको अन्तु डाँडा भने सूर्योदयका लागि प्रख्यात छ । अन्तु गाउँबाट मिरिक बजारको मनोमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ । हिमशृंखला, कञ्चनजंघा र कुम्भकर्ण नियाल्न सकिन्छ । अन्तुको अधिकांश क्षेत्र चिया बगानले ढाकेको छ । चियाको दृश्य हेर्न पर्यटक अन्तु होमस्टेमा पर्यटकहरू आउने गरेको होमस्टेका अध्यक्ष धनकुमार आले बताउँछन् । अन्तुमा लाप्चा, राई, मगर, तामाङ, लिम्बू र नेवार संस्कृति झल्कने नाचगान प्रदर्शन गरिन्छ । एट्याज कोठामा बसेको एक रातको १ हजार रुपैयाँ लाग्छ, जसमा खाना, ब्रेकफास्ट आवास समावेश गरिएको हुन्छ । इलामको फिक्कलबाट अन्तु १४ किमि दूरीमा छ । फिक्कलबाट ४५ मिनेटको बस, जिप यात्रामा जान सकिन्छ ।
पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिका–५ मा रहेको होमस्टे हो– सुनखरी होमस्टे । उक्त बस्तीमा १५ घरमा होमस्टे सञ्चालित छन् । होमस्टेमा पुगेका पर्यटकहरूले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती सफारी गराउने गरेको सुनखरी होमस्टेका अध्यक्ष शम्भु पौडेल बताउँछन् । पौडेलका अनुसार होमस्टेमा आउने पर्यटकहरूले ऐतिहासिक ढुंगेश्वर महादेव मन्दिर पनि अवलोकन गर्न सक्छन् । होमस्टेमा ५ सय रुपैयाँमा एक रात बिताउन सकिन्छ । सुनखरी होमस्टे पुग्न पर्सा हुँदै १० मिनेटमै सुवर्णपुर पुगिन्छ ।
दरै गाउँ, चितवन
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवस्थित रहेको होमस्टे हो– दरै गाउँ होमस्टे । २०७१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त दरै गाउँका ११ घरमा होमस्टेहरू सञ्चालनमा आएका छन् । जंगलमा जरायो, चित्तलहरू देख्न सकिन्छ । यसका साथै होमस्टेमा दरै जातिका संस्कृतिहरूलाई पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ । स्थानीय कुखुरा, हाँसको स्वादका परिकारहरूको स्वाद लिन सकिन्छ ।
दरै गाउँमा १ हजारमा १ रात बिताउन सकिने अध्यक्ष गोविन्द गैरे बताउँछन् । उनका अनुसार रुमको ६०, खाना र खाजा भने सस्तो छ । दरै गाउँ होमस्टे पुग्न चितवनबाट जान सकिन्छ । चितवनबाट पर्सा १७ किमि दूरीमा छ । पर्सा बस, जिप र अटोबाट पुग्न सकिन्छ । पर्साबाट भने दरै गाउँ ७ किमि दूरीमा छ । पर्साबाट गाउँसम्म गाडी चल्छ । एक किलोमिटर भने कच्ची बाटोकोयात्रा गर्नुपर्छ ।
२०११ देखि मकवानपुरमा सञ्चालनमा आएको हो– चित्लाङ होमस्टे । २ हजार २ सय ८० मिटरमा रहेको उक्त गाउँका ६ घरमा होमस्टेहरू सञ्चालनमा छन् । चित्लाङ पुग्ने पर्यटकहरूले सम्राट अशोकले ईसापूर्व २ सय ७३ मा बनाएको चैत्य अवलोकन गर्न सकिने होमस्टेका संयोजक राधाकृष्ण बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार चित्लाङमा अर्गानिक उत्पादन मुला, साग, आलु, भुइँस्याउ पाइन्छ । यस ठाउँमा बाख्राको दूधबाट बनेको चिजको पनि स्वाद लिन सकिन्छ ।
होमस्टेमा एकराते प्याकेजको १ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्छ । काठमाडौंबाट चन्द्रागिरि हुँदै चित्लाङ पुग्न सकिन्छ । थानकोट पार्कपछाडि गोदामबाट जिप चल्छन् । त्यहाँबाट चन्द्रागिरि भन्ज्याङ हुँदै चित्लाङ पुगिन्छ । गोदाम चित्लाङ पुग्न १३ किमिको कच्चीबाटोको यात्रा गर्नुपर्छ ।
नेपालको पहिलो होमस्टे हो– सिरुबारी होमस्टे । २०५२ सालदेखि क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङको पहलमा सञ्चालनमा आएको हो । स्याङ्जा जिल्ला आदिखोला गाउँपालिका–१ सिरुबारीमा अवस्थित छ, जहाँ ४३ घरमा होमस्टेहरू सञ्चालनमा छन् । १ हजार ६ सय १० मिटरमा रहेको सिरुबारीमा गुरुङ बस्ती छ । उक्त होमस्टेमा गुरुङ जीवनशैली, हिमाली सौन्दर्यले मन लोभ्याउँछ । अतिथिहरूलाई पञ्जैबाजासहित स्वागत गर्नु सिरुबारीको परम्परा रहेको छ ।
सिरुबारी होमस्टेमा स्वदेशी र विदेशीलाई फरक मूल्य राखिएको होमस्टेका अध्यक्ष जुम गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाली पर्यटकलाई एक दिनको १ हजार २ सय र विदेशी पर्यटकलाई एक दिनको २ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । पोखराबाट सिरुबारी गाडीमा जान सकिन्छ । पोखराबाट छुटेको ४ घण्टामा सिरुबारी पुग्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टिले उत्कृष्ट गन्तव्य हो– काउलेपानी । काउलेपानी होमस्टे पहिलो वातावरणमैत्री होमस्टे बनेको छ । २०११ देखि सञ्चालित काउलेपानी होमस्टे बेसीसहर नगरपालिका–३ मा अवस्थित छ । २५ घर रहेको उक्त गाउँमा १५ घर होमस्टे सञ्चालनमा रहेको होमस्टेका संयोजक देवबहादुर गुरुङ बताउँछन् । यहाँ पाहुनाहरूलाई लोकल कुराको स्वाद साथै गुन्दु्रक, ढिँडो चखाइन्छ । यस होमस्टेबाट बुद्ध हिमाल, मनास्लु, माछापुच्छ्रेजस्ता करिब १५ वटा हिमाल देख्न सकिने गुरुङको भनाइ छ ।
होमस्टेमा एक रात बिताएको ९ सय रुपैयाँ लाग्छ । गुरुङका अनुसार प्याकेजमा स्वागत, डिनर, बास, र ब्रेकफास्ट समावेश हुन्छ । बेसीसहरबाट काउलेपानी कच्ची सडक छिचोल्नुपर्छ । मोटरसाइकल जिपममार्फत करिब ४० मिनेटको यात्रामा पुग्न सकिन्छ ।
ग्राभर भ्याली, बाँके
बाँके जिल्लाको पहिलो सामुदायिक होमस्टे हो– गाँभर भ्याली होमस्टे । बाँके बैजनाथ गाउँपालिकामा अवस्थित भ्यालीमा १७ वटा होमस्टे सञ्चालनमा छन् । गाउँमा थारु र मुगेलीहरूको संयुक्त बसोबास छ । मुगेली थारुको मिश्रित संस्कारमा परम्परागत परिकारहरूको स्वाद लिन सकिने भ्यालीका अध्यक्ष कृष्ण चौधरी बताउँछन् । चौधरीका अनुसार अनदीको भात, ढिक्री, कोदो, ढिँडो, घोघी र गंगटोजस्ता थारु स्वादहरू लिन सकिन्छ ।
प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ पर्छ, जसमा साँझको खाना, बास, ब्रेकफास्ट समावेश गरिएको हुन्छ । खाजामा भने थारुहरूको ढिक्री, कोदाको रोटी, अन्डा समावेश गरिने चौधरी बताउँछन् । गाभर भ्याली पुग्न नेपालगन्जसम्म हवाई यात्रा वा बस यात्रा गर्न सकिन्छ । नेपालगन्जबाट १० किमिको बाटो पार गर्दै कोहलपुर पुगिन्छ । कोहलपुरबाट भ्याली ८ किमि छ । कोहलपुरबाट गाभर भ्याली पुग्न भने १ किमि कच्ची बाटोको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
थारु होमस्टे, सुर्खेत
सुर्खेतको वीरेन्द्रगर नगरपालिका–१० मा नयाँ गाउँमा २०७५ सालदेखि थारु होमस्टे सञ्चालनमा आयो । सामुदायिक होमस्टेका रूपमा विकास गर्ने भने पनि जितबहादुर चौधरीको घरमा मात्रै होमस्टे सञ्चालनमा छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले एक्लै भए पनि सञ्चालनमा लागेको चौधरी बताउँछन् । चौधरीले आउने पाहुनाहरूलाई लोकल कुखराको मासु, कालो सुगुरको मासुको स्वाद चखाउँछन् । त्यस्तै थारुका अन्य परिकारहरूको पनि स्वाद लिन सकिन्छ । होमस्टेमा ८ जनासम्म बस्न सक्छन् । उक्त गाउँ पुग्ने पर्यटकहरूले बुलबुल ताल अवलोकन गर्न सक्छन् ।
होमस्टेमा एक रातको १ हजार रुपैयाँ लाग्छ, जसमा खाना, बास र बेकफास्ट समावेश गरिएको हुन्छ । खाजामा अनादिको भात, ठिकुरी माछा, आलुको अचार समावेश गरिएको हुन्छ । त्यहाँ पुग्न सुर्खेत विमानस्थलबाट २ किमिको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।
रानाथारु होमस्टे, कञ्चनपुर
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका–१४, १६ मा रहेको ४२ घरधुरीमध्ये ८ वटा घरमा होमस्टे सञ्चालनमा रहेको बताउँछन्, होमस्टेका अध्यक्ष पर्शुराम राना । उनका अनुसार होमस्टेमा ३२ जनासम्म पाहुना राख्न सक्ने सुविधा छ । रानाथारु होमस्टे पुगेका पर्यटकहरूले दोधारा चाँदनीको झोलुङ्गे पुल, शुक्लाफाँटा, रानीताल, पिपरैयाको हात्तीसार, हिरापुरको कृष्णसार संरक्षणजस्ता पर्यटकीय ठाउँहरू अवलोकन गर्न सक्नेछन् ।
रानाथारु होमस्टेमा प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँमा बस्न सकिने सुविधा रहेको रानाको भनाइ छ । रानाथारु होमस्टे पुग्न महेन्द्रनगर जानुपर्छ । महेन्द्रनगरबाट शुक्लाफाटा ६ किमि दूरीमा पर्छ । शुक्लाफाटा पुग्न बस, जिपको प्रयोग गर्न सकिन्छ । शुक्लाफाँटाबाट १ किमि दूरीमा रहेको छ, जहाँ पुग्न शुक्लाफाँटाबाट १० मिनेट लाग्छ ।
प्रकाशित :पुस १७, २०७६
होमस्टे चिनाउन मनकाशी
सुकेपोखरीमा अर्गानिक होमस्टे
रमेश उप्रेतीको रोजाइका अभिनेत्री
प्रकृतिसँग रमाउने गन्तव्य : अमलटारी
बाल आत्महत्याको चिन्ता माघ २७, २०७६
क्लासिक जिपलाइनको मज्जा माघ २६, २०७६
डेब्यु परीक्षा : सफल भए त विराज ? माघ २५, २०७६
प्रचण्डको नातिनी भन्दा गायिका स्मितालाई कस्तो लाग्छ ? माघ २२, २०७६
बिहेबारे पुष्पको मनमा के खेल्छ ? पुस २१, २०७६
सोमेश्वरमा कलात्मक शिला पुस २०, २०७६
नेपालका निर्माता : प्रिमियरमा मख्ख, अर्को दिन हिस्स ! मंसिर २८, २०७६
टिनएज फेन्टासी मंसिर २३, २०७६